About Us: Our Mission | WordPress.org Soomaali
Dimuqraadiyaynta Wax Faafinta
Xorriyadda dhismaha. Xorriyadda isbeddelka. Xorriyadda wax wadaagga.
WordPress waa softiweer loogu talagalay qof walba, oo xoogga saaraya helitaanka, waxqabadka, amniga, iyo fududeynta isticmaalka. Waxaan aaminsanahay in softiweerka fiican uu yahay inu ku shaqeyo dejinta ugu yar, si aad diirada u saarto wadaagida sheekadaada, badeecadaada, ama adeegyadaada si xor ah. Aasaaska Softiweerka WordPress waa mid fudud oo la saadaalin karo si aad si fudud u bilaabi karto. Waxa kale oo uu bixinaya astaamo awood u leh koritaanka iyo guusha.
Waxaan aaminsanahay dimuqraadiyadaynta daabacaadda iyo xorriyadaha la socda ilaha-furan. Fikradani waxay Taageeraysa bulsho weyn oo dad ah oo iska kaashanaya waxna ku biirinaya mashruucan. Bulshada WordPress waa soo dhaweynaysa waana loo dhan yahay. Xiisaha ka-qaybgalayaashayada ayaa horseedaya guusha WordPress taasoo, iyaduna, kaa caawinaysa inaad gaarto yoolalkaaga.
Wax badan ka baro softiweerka
Wax badan ka baro dadka
Ka-qaybgalayaasha WordPress waxay ka shaqeeyaan adduunka oo dhan, waxayna u hureen saacado aan tiro lahayn si ay u dhisaan aalad dimuqraadiyeynaysa faafinta. WordPress waa softiweer il-furan oo bilaash ah aanana la qiimo karin.
Baro wax ku saabsan WordPress, meesha ay joogtay, iyo halka ay ku socoto.
Waxaa jira faahfaahin badan. La soco wixii faahfaahin ah.
Wax ka baro bulshada WordPress iyo sidaan iskula xiriirno.
WordPress wuxuu bilaabmay 2003 markii Mike Little iyo Matt Mullenweg ay abuureen fork of b2/cafelog. Baahida loo qabo nidaam faafin shakhsiyeed oo xarrago leh, si fiicanna loo naqshadeeyay ayaa iska caddayd xitaa markaas. Maanta, WordPress waxaa lagu dhisay PHP iyo MySQL, waxaana lagu shatiyay GPLv2. Sidoo kale waa madasha ay doorteen in ka badan43% dhammaan baraha internetka.
Mashruuca isha furan ee WordPress wuxuu u kobcay siyaabo horumarsan muddo ka dib — oo ay taageerayaan xirfadlayaal horumarineed oo xamaasad leh, naqshadeeyayaal, saynisyahanno, balogerro, iyo qaar kaloo badan. WordPress wuxuu siiyaa fursadda qof walba inuu abuuro waxna la wadaago, laga soo bilaabo sheekooyinka shaqsiyeed, farsamada gacanta ilaa dhaqdhaqaaqyo beddelaya adduunka. Dadka leh khibrad farsamo oo kooban ayaa isticmaali karta “marka lasoo rogoba”, ayadoo dad badan oo aqoon u leh farsamada ay u habayn karaan siyaabo cajiib ah.
WordPress wuxuu shati ku leeyahay Shatiga Guud ee Dadweynaha (GPLv2 ama ka dib) kaas oo bixiya afar xoriyadood oo asaasi ah. Tixgeli kan ee Xeerka Xuquuqda WordPress:
Inaad u maamulato barnaamijka ujeedo kaste.
Inaad baratid sida barnaamijku u shaqeeyo una beddeshid si uu u sameeyo waxa aad rabto.
Inaad dib u qaybisid.
Inaad u qaybisid nuqullada meerisyadaada aad baddeshey dadka kale.